गर्दै नगरेको गल्तीका लागि किन... :: मोइन उद्दिन :: Setopati
मोइन उद्दिन असार २७
अहिले सामाजिक सञ्जालमा सेतोपुल नजिकै रूद्रमती खोलामा फोहोर फालिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको छ। त्यसरी खाेलामा फाेहाेर फालेकाे दृश्य देख्दा मलाई पनि नरमाइलाे लाग्याे।
त्यो फोहोर हाम्रो हो। तर हामीले फोहोर संकलन गर्ने मान्छेलाई 'खोलामा लगेर फाल' भनेका थिएनाैं।
हामीकहाँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू फोहोर उठाउन आउनुहुन्छ। गिटी, सिमेन्टको धूलो र माटो लैजान मान्नु हुन्न। धेरै दिनदेखि घर बनाएर थुप्रिएका ती सामग्रीले घर फोहोर भइरहेको थियो। हामीले पटकपटक महानगरबाट फोहोर उठाउन आउनेहरूलाई अनुरोध गर्दा पनि लान मान्नु भएन।
हाम्रो घरमा एक जना दिदी काम गर्नुहुन्छ। उहाँले नै चिन्नुभएकाे मान्छेले यस्तो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जानकारी पायौं। ५ हजार रूपैयाँ दिएर उक्त फाेहाेर व्यवस्थापनको जिम्मा दियाैं। दिदीले 'घर बनाइरहेका एक ठाउँमा चाहिन सक्ला, त्यही छाेडिदिनू' भनेर पठाउनुभएकाे थियाे। उनीहरूले भने लगेर खाेलामा फालिदिएछन्।
एक जना व्यक्तिले भिडिओ खिचेर फेसबुकमा राख्नुभएछ। अनि बल्ल हामीलाई थाहा भयाे। त्यतिखेर भिडिओ खिचिरहँदा उहाँले 'यहाँ फाेहाेर नफाल, कारबाही हुन्छ' भनेर प्रतिकार जनाउनुभएकाे भए त्यहाँ फाेहाेर फालिनबाट जाेगिन्थ्याे हाेला।
हिजो शुक्रबार बिहान नेपाल प्रहरी र रूद्रमती सफाइ अभियानकर्मी रोहित गिरी लगायत अन्य व्यक्तिहरू हाम्रो घरमा सोधीखाजी गर्न आउनुभयाे। उहाँहरूले ठेलागाडावालालाई नियन्त्रणमा लिनुभएछ। हामीले त्यो फोहोर हाम्रै हो भनेर स्विकार्‍यौं। त्यहाँ खोलामा फाल्न लगाएको भने होइन भन्यौं।
त्यति भन्दाभन्दै पनि उहाँहरूसँग आउनुभएका एक महिलाले हाम्राे परिवारको फोटो खिच्नुभयाे। हामीले प्रतिकार गर्‍यौं।
रोहित सरले 'हामीले यसरी घरधनीसँग कुरा गर्‍यौं' भन्नलाई मात्र खिचेकाे भन्नुभयाे। अनि हामी फोटोसुट स्टाइलमा उभिएर फोटो खिच्न तयार भयाैं।
त्यसको दुई घन्टापछि राेहित सरले फोन गरेर बोलाउनुभयो। म काममा गइसकेकाले भाइलाई पठाएँ। भिडिओ भाइरल भइसकेकाे थियाे। दाेषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाब आइरहेकाले ५० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेछन्। भाइले डराएर १०-१५ हजारमा मिलाइदिनू भनेछ। आइतबार खबर गर्छु भनेर भाइलाई छाडिदिएछन्।
बेलुका फेसबुक खोल्दा उहाँहरूले 'यो मान्छेलाई यसरी जरिवाना तिराइयो' भनेर बिहान खिचेका फोटा सार्वजनिक गरिदिनुभएछ। त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखिसकेपछि यो त अत्ति नै भयो भनेर रोहित सरलाई फोन गरेँ।
उहाँले 'जरिवाना नतिर्ने हो भने प्रोसेसमा जान्छौं' भन्नुभयाे। 'आइतबार नेपाल प्रहरी र महानगरपालिकाका प्रहरी आएर कारबाही हुन्छ, त्यसै गरौंला' भन्नुभएकाे छ।
हामी असभ्य नागरिक होइनौं। घर टोल सफा गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सचेत नागरिक भएकाले खोलामा फोहोर फाल्नुहुन्न भन्ने ज्ञान छ। अरूलाई पनि नफाल्न भन्छाैं।
हामीले गल्ती गरेको भेटिए कानुनबमोजिम सजाय भाेग्न तयार छौं। तर यो घटनाले हाम्राे परिवार निकै मानसिक तनावमा छ।
भिडिओकै आधारमा बिना तथ्य हाम्रो बेइज्जत गर्नु कत्तिकाे जायज हाे? जसलाई फाेहाेर जिम्मा दिएको हाे उसले गल्ती गर्दा घरधनीले किन सजाय र बेइज्जती भोग्नुपर्ने? हामीले गर्दै नगरेको गल्तीका लागि किन डराएर जरिवाना तिर्ने?
अर्को प्रश्न, किन महानगरपालिकाले गिटी, सिमेन्टको धुलो र माटो लैजान मान्दैनन्? ती पनि त फोहोर हुन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका के हो? त्यो पनि लानुस् भन्दा बढी पैसा लाग्छ भन्छन्। यसको बाटो पनि देखाइ दिनुपर्‍यो।
रोहित गिरीज्यूहरूले हामी लगायत अन्यलाई दोषी देखाएर '२३ हजार तिरायौं' भन्दै फेसबुकमा हाम्रो परिवारको फोटो राखेर स्ट्याटस् राख्नु र राष्ट्रिय स्तरको न्यूज पोर्टलमा हाम्रो नाम छापिदिनु कतिकाे जायज हाे?
गैरजिम्मेवार तरिकाले हामीलाई अन्याय र बेइज्जत भोग्नुपरेको जिम्मा कसले लिन्छ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २७, २०७७, २१:५५:००